Satechi Mira uye Hub yePadad Pro, mira uye zvese zvinongedzo | Nhau dze iPhone
Kushandisa yako iPad mudesktop mode ichokwadi ine vateveri vakawanda, uye Satechi inotipa tsigiro iyo kwete chete inokuisa iwe munzvimbo yakakwana yekushanda asi zvakare inokupa iwe zvese zvinongedzo zvaunoda kubatanidza accessories.
Iyi Satechi Aluminium Stand uye Hub yakagadzirwa nealuminium, sezita rayo rinoratidza. Icho chivharo chakasimba chine chitarisiko chekumira nekushandiswa uye nekufamba kwenguva zvakanaka kwazvo, iyo ine yakangwara dhizaini inotibvumira kwete chete kuishandisa sekutsigira iPad asiwo kuchengetedza USB-C yekubatanidza tambo mukati. iyo kana yapetwa Yakagadzirirwa chaizvo kushandiswa neiyo iPad Pro 11 ″ kana 12,9 ″, asi inogona zvakare kushandiswa nemaficha akafanana pane itsva iPad Air., kunyangwe nei zvisiri, yazvino iPad mini yatova ne USB-C yekubatanidza. Asi isu tinogona zvakare kuishandisa neMacBook Air kana Pro, pasina matambudziko.
Iyi aluminium zvinhu inosanganiswa nemamwe silicone padding inodzivirira pamusoro peiyo iPad yako kana yaiswa mumubati. Iwe unogona kushandisa imwe iPad inodzivirira kesi isina kunyanya kukora (kusvika ku15mm) hapana dambudziko neichi chimire kubva kuSatechi. Rutsigiro haruna kuchinjika mukurerekera, kunyangwe iyo yakamisikidzwa yakanyatso kugadzikana kushanda, ndingadai ndakafarira imwe sarudzo. Iyo ine futi rubber tsoka dzinodzivirira kukwenya pamusoro paunoisa pamwe chete nekusatsvedza.
Pakupetunura rutsigiro, tinowana nzvimbo yakatsaurirwa kuchengetedza USB-C tambo yatinofanira kubatanidza kune yedu iPad kuti zvimwe zvese zvinongedzo zvishande. Ipfungwa yakanaka kudzivirira kurasikirwa netambo, kana tisingazvishandise, zvese zvinogara mubhokisi diki realuminium rine saizi yakanyatso compact, yakakwana kuisa mune chero bhegi kana bhegi. Izvo zvakaderera ndezvekuti tambo haigone kubviswa, asi kuvakwa kwetambo kwakasimba uye handifunge kuti inopa diki dambudziko rekugara.
Kana zviri zvekubatana kwatinako, Satechi inotipa izvo zvatinowanzoda mubasa redu remazuva ose ne iPad yedu.
HDMI ine 4K rutsigiro pa60Hz
USB-C PD ine simba rinosvika ku60W (haisi kufambisa data, inobhadharisa chete)
USB-A 3.0 ine kutapurirana kumhanya kusvika ku5 Gbps
3.5mm jack yekupinza odhiyo uye kubuda
SD uye microSD slots (UHS-I: kusvika ku104 MB/s)
Ese madoko ari kuseri kwechishandiso, chakagadzirirwa kuiswa padesktop, yakabatana nemonitor, vatauri, hard drive, nezvimwe. Hazvidikanwi kuzarura chigadziko kuti chishande, tinogona kuishandisa kupeta chero bedzi isu tichibvisa tambo yekubatanidza. Ini ndinongosuwa kuti chiteshi che USB-C chinobvumira kupinza data, uye panogona kunge paine avo vanopotsa kubatana kweEthernet, ini pachangu handidaro. Zvisungo zvinoshanda sezvinotarisirwa uye unogona kutamisa mafaira akakura kwazvo usingatyi kudimburwa Hazvitarisirwa
Satechi inotipa tsigiro kune yedu iPad iyo zvakare ine hukama hwatinoshandisa zvakanyanya muzuva redu nemazuva. Nemhando yekuvaka inotaridza mhando nealuminium sechinhu chikuru mukuvaka kwayo, dhizaini yaro yehungwaru inotitendera kuti tive nerutsigiro rwakakwana uye rwakapeta rwekutora chero kupi uye kuwana zvakanyanya kubva kune yedu iPad Air, mini kana Pro. ( kunyange MacBook). Unogona kuitenga kuAmazon kwe € 104,99 (link)
stand and hub
Yakakwana uye isina huremu
USB-C kuchaja chete
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Satechi Mira uye Hub yePad Pro, mira uye zvese zvinongedzo
Iyo yazvino beta yeApple Music yeApple inoburitsa remangwana Apple Classical